ကွင်းလယ်၂ယောက်ကြောင့် ဖလားမရပဲ ငါးခြောက်တန်း ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ရွိင်ကိန်းသတိပေး – FBV SPORT NEWS
ကွင်းလယ်၂ယောက်ကြောင့် ဖလားမရပဲ ငါးခြောက်တန်း ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ရွိင်ကိန်းသတိပေး
May 14, 2021 By admin Sports News
သရဲနီတို့ရဲ့ ကြီးမြတ်လှတဲ့ အိုးထရက်ဖို့မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တစ်နေရာအတွက် အသဲအသန်ဖြစ်နေရှာတဲ့ ကြိုးကြာတို့ကလော့ကို ဆိုးလ်းရှားရဲ့ ယူနိုက်တက်က ၄ဂိုး ၂ဂိုးနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆိုလ်းရှားအနေနဲ့ ကစားသမား၂ယောက်ကို ဆက်သုံးနေရင် မန်စီတီးကို စိန်ခေါဖို့မပြောနဲ့ငါးခြောက်တန်းပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ရွိင်ကိန်းကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်တို့ဟာ လက်စတာကို အရံလူတွေနဲ့ ပွဲထွက်ကစားခဲ့လို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ခါးသီးပြိုင်ဖက်လီဗာပူးကို ရင်ဆိုင်ရာမှာတော့ လူစုံတက်စုံပွဲထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတောင် လီဗာပူးဘက်က အဓိက စီနီယာကစားသမား ၄ယောက် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပဲ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ ကြိုးကြာတို့ရဲ့ အရှိုက်ကိုထိုးနှက်ခြင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ကပွဲစဉ်နဲ့ပက်သက်လို့ အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကစားသမား ၂ယောက်ကို ဆက်သုံးရင် ပက်ဂွာဒီယိုလာကို စိန်ခေါဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရွိင်ကိန်းက ခုလို‌ပြောပါတယ်.
“ဖရက်ဒ်နဲ့အမ်စီတော်မီနေးပါရင် ဘယ်ဆုဖလားကြီးမှ မမျှော်ကိုးနဲ့။သူတို့က အလယ်မှာပွဲအစတည်းက ထည့်ကစားတာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့အတွဲနေရာမှာ အစားထိုးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မန်စီတီးကိုစိန်ခေါဖို့မပြောနဲ့ နောက်ရာသီ မနဲရုန်းကန်နေရလိမ့်မယ်”လို့ ရွိင်ကိန်းကဆိုပါတယ်။
“ညကပွဲကိုကြည့်ရင် သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိတာအထင်းကြီးပါ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တော့ နောက်ရာသီဘာဖလားမှ မျှော်မနေပါနဲ့။ ကွင်းလယ်မှာ သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ပါ။ တော်မီနေးရောဖရက်ရောဟာ သာမန်ဆိုကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် သူတိုထက်ကောင်းတဲ့ ကစားသမား၂ယောက်အစားမထိုးနိုင်ရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ပါ”လို့ရွိင်ကိန်းကဆိုတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဖရက်နဲ့တော်မီနေး ဘိုင်လီ လင်ဒီလော့တို့အတွဲဟာ တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်လို့ ရွိင်ကိန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။
လက်ရှိကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်လို့ဆိုတဲ့ ပေါ့ဘာကလည်း ယူနိက်တက်နဲ့သက်တမ်းတိုးမယ့်ကိစ္စရပ်တန်နေတဲ့အတွက် ယူနိက်တက်တို့အနေနဲ့ တိုက်စစ်မှူးထက် ကွင်းလယ်နဲ့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရတဲ့ နောက်တန်းကိုအားဖြည့်ရမယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်ပါလဲ.(ဆဲချင်ရွိင်ကိန်းကိုလွတ်လပ်စွာဆဲနိုင်ပါတယ်။)
ဆိုလ်းရှားရဲ့ဓါးချက် ရင်ဝစိုက်ခဲ့ရပေမယ့် ကန္တရထဲကအိုအေစစ်တစ်စက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တဲ့ ကလော့
ကင်မရာရှေ့ပြေးသွားပြီး မန်ဖန်တွေအတွက် ပျော်စရာသတင်းပါးခဲ့တဲ့ ဟာလန်းနဲ့ဆန်ချို